Dowladda Federaalka oo Sheegtay in uusan waxba iska beddelin heshiiskii Duulimaadyada | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka oo Sheegtay in uusan waxba iska beddelin heshiiskii Duulimaadyada
MUQDISHO – Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in uusan waxba iska beddelin heshiis ay honey ula gashay dowladda Kenya kaasoo ahaa in diyaaradaha ka dhoofaya garoonka Muqdisho ay toos u tagaan Nairobi oo aysan marin magaalada Wajeer.
Waxaa dhacday shalay oo ay taariikhdu ahayd in laba diyaaradood oo u socday Nairobi ay sii mareen Wajeer halka laba kalena ay si toos ah u aadeen magaalada Nairobi.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baaris ay dowladu sameysay lagu ogaaday in sababtu labada diyaaradood loo marsiiyey Wajeer ay aheyd cilad farsamo oo la xiriirta Saadaasha hawada iyo ruqsada duulimaadka.
Waxa lagu sheegay Warsaxaafadeedka in arrintan haba yaraatee aysan wax lug ah ku laheyn heshiisyadii Soomaaliya iyo Kenya dhexmaray ee ku aadanaa in diyaaraduhu ay si toos ah u aadayaan magaalada Nairobi.
Dowladda Federaalka ayaa sheegtay iney xooga saari doonto in shirkadaha diyaaradaha ay hubiyaan ka hor inta aysan ka duulin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ,in ay haystaan fasaxii iyo dokumentigii aasaaska u ahaa dulimaadkooda si aysan u dhicin in ay maraan Wajeer.